ကျူးဘား ပီဆို - ဝီကီပီးဒီးယား
peso cubano (စပိန်)
ချေဂွေဗါရာပုံပါသည့် ၃ ပီဆိုတန် ငွေစက္ကူ
ကျူးဘား ပီဆို သည် နိုင်ငံတွင်း၌ မိုနီဒါ နာစီယန်နယ် (moneda nacional) ဟု သိကြသော ကျူးဘားနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ငွေကြေး ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် မတိုင်ခင်အထိ ကျူးဘားတွင် ပီဆို (၂) မျိုး ထုတ်သည်။ တမျိုးမှာ ဒေါ်လာနှင့်ချိတ်ထားသော ငွေလဲနိုင်သောပီဆိုဖြစ်ပြီး ကျန်တခုမှာ ပြည်တွင်း၌ လည်ပတ်သုံးစွဲသည့် ပီဆိုတည်း။ တပီဆိုတွင် ၁၀၀ စန်တဗို ရှိသည်။ ငွေလဲနိုင်သောပီဆိုအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ တဒေါ်လာနှင့် ချိတ်ထားသည်။ ယင်း ငွေလဲနိုင်သောပီဆိုမှာ ပြည်တွင်းသုံး ၂၅ ပီဆို တန်၏။ သို့သော် မည်သည့်ပီဆိုကိုမှ နိုင်ငံပြင်သို့ ထုတ်ခွင့်မပြု။ ပြင်တွင်းသို့ ယူလာသည်ကို၎င်း၊ ပြည်ပသို့ ထုတ်သွားသည်ကို၎င်း ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည်။ 
၂၀၂၀ ပြည့်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်တွင် ငွေလဲနိုင်သောပီဆိုကို လည်ပတ်မှုမှ တဖြည်းဖြည်း ဖယ်ရှားသွားမည်ဟု ကြေညာသည်။ ၂၀၂၁ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင် ငွေကြေးလည်ပတ်ရာတွင်သုံးသော တခုတည်းသော ငွေကြေးဖြစ်လာပြီး အမေရိကန် တဒေါ်လာကို ၂၄ ပီဆိုနှင့် ချိတ်သည်။  ထိုနေ့မှစ၍ ဘဏ်နှင့် ငွေလဲဌာနများတွင် ပီဆိုတမျိုးတည်းသာ ထုတ်ပေးတော့၏။  ယခင်က ကျူးဘား နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများသည် တဒေါ်လာ-တပီဆိုနှုန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းကြောင့် ဤလုပ်ဆောင်ချက်မှာ နည်းပညာအရ ပီဆိုကို တန်ဖိုးကျစေသည်။ 
ငွေကြေးစနစ်မပေါင်းမီက ကျူးဘားရှိ နိုင်ငံလုပ်သားအများစုသည် အခြေခံလစာကို ပြည်တွင်းသုံးပီဆိုဖြင့် ရသည်။ အချို့ဌာနတို့က ငွေလဲနိုင်သောပီဆိုနှင့် ရ၏။ ၂၀၁၄ ခုမတိုင်မီက ဆိုင်အများစုသည် ၎င်းတို့ရောင်းသော ပစ္စည်းအလိုက် ငွေကြေးစနစ်တမျိုးကိုသာ လက်ခံသည်။ ၂၀၁၄ ခုနောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်များသည် နောက် ငွေကြေးပေါင်းချိန်ကို ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် မည်သည့်ငွေကိုမဆို လက်ခံခဲ့၏။
ပြည်တွင်းသုံးပီဆိုနှင့် ငွေလဲနိုင်သောပီဆို ကွာသည်မှာ ငွေလဲနိုင်သောပီဆို၏ အကြွေစေ့များသည် ရှစ်ထောင့်ပုံဖြစ်၏။ ချွင်းချက်မှာ အသုံးများသည့် ပြည်တွင်းသုံးပီဆို ၁-ပီဆိုတန် အကြွေစေ့သည်လည်း ရှစ်ထောင့်စေ့ပင်တည်း။  ကျန် ပြည်တွင်းသုံးပီဆို၏ ငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ ငွေစက္ကူများသည် စတုဂံပုံသာ သုံးသည်။
↑ "Currencies". Jibacoa Cuba.
↑ Matthew Bristow and Jim Wyss. "Cuba to End Dual Currency System in 2021 Amid Crisis Reform". Bloomberg. 2020-12-11.
↑ "Red de tiendas de la Corporación Cimex y Tiendas Caribe que aceptarán CUC". Cuba Debate. 2021-01-02.
↑ Marc Frank and Sarah Marsh. "Cuba to devalue peso steeply in January in major monetary overhaul". Reuters. 2020-12-11.
↑ "1 peso at Numista". Numista.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျူးဘား_ပီဆို&oldid=684400" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။